“မ”မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “မ”မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 23, 2011 in My Dear Diary | 21 comments
“ မ ………..မီဒီယာ…………. တည်ကြည်ပါ”
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ဒေါက်တာခင်ရွှေနဲ့မီဒီယာတွေကြား အဖုအထစ်လေးတွေဖြစ်ခဲ့တာဖတ်ရ။
တစ်ခါတစ်လေတောက်တဲ့က တိုင်အခေါင်းထဲကထွက်လာရင် အထူးအဆန်းအနေနဲ့ကြည့်ကြ။
ကျနော်စိတ်ထဲမှာတော့ တောက်တဲ့ ဆိုတာအိမ်မြောင်အကြီးစားလို့ထင်။
ဒါပေမယ့်တစ်ရက်မှတော သုံးပေခွဲလောက်ရှိတဲ့ တောက်တဲ့ကြီးကို လူကပွေ့ထားတဲ့ဓါတ်ပုံကြီးပါလာ။
ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေပြောတာပြန်ကြားမိတော့ တောက်တဲ့ကြီးပွေ့ထားတဲ့သူ ခွာမရရင် အခက်လို့ တွေးမိသေး။
အဲဒီပွေ့ထားတဲ့အကောင်ကြီးက မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းကျော်ဆိုဘဲ။
ဟောသိပ်မကြာပါဘူး ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့တောက်တဲ့သတင်းက သတင်းမှားကြီးပါတဲ့။
ခက်တာက ဂျာနယ်ထဲက အရေးအသားအချက်အလက်တွေက သဘာဝနဲ့ကင်းကွာ။
ကလေးမလေးက ကားအောက်ရောက်တော့ အိပ်ဇောပိုက်ကို ဖက်ပြီးပါသွားသတဲ့၊
နောက်ဆေးရုံတက်တာ ငွေ27သိန်းလောက်ကုန်သွားတာ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ပြန်ဆင်းခဲ့ရပါသတဲ့။
အဲဒါကိုဖတ်မိတော့ ကျနော့်ခေါင်းထဲကို အတွေးတွေရောက်လာပါတယ်။
ဆေးရုံကနေပြီး ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့ ဆင်းမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်ကြီးတွေကလက်ခံပါသလား။
အခုလိုလူသိရှင်ကြားယဉ်တိုက်မူ့ဖြစ်တာကို ဘယ်ဆေးရုံမှာများသွားကုလို့ အခုလို ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်လို့
တကယ်လို့များပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တာကြောင့်ဆင်းခွင့်ပြုတာမှန်ရင် အတော်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
အင်ဂျီအိုတစ်ယောက်ကနေ ပြီးလူကုန် ကူးတယ်ဆိုတာလေးပေါ့။
သူကြားမိတာကတော့ ဒီသတင်းက မှားနေတယ်တဲ့။
သူပြောတာသာမှန်တယ်ဆိုရင် အရေးခံရသူက အလကားနေရင်းနစ်နာပြီပေါ့။
မှားသွားလို့ဖြေရှင်းတယ်ထား၊တောင်းပန်တယ်ထား ပထမသတင်းကို ဖတ်ထားတဲ့သူ
ဘယ်နှစ်ယောက်က ဖြေရှင်းချက်ကို ဖတ်မိပါမလဲဆိုတာကို။
အဲတော့လဲ မီဒီယာများကလဲ ကိုရလာတဲ့ သတင်းကို ဟုတ်မဟုတ်သေချာစီစစ်ပြီးမှ
ဟိုတစ်ရက် အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားရင်းအိမ်တစ်အိမ်ရောက်တော့ တီဗွီဖွင့်ထားတာပါတယ်။
တစ်ဖွဲ့က စန္ဒယားတီးတဲ့ပုံစံလေးကို အကွက်ဖော်ပြီးကသွားတာ တကယ်ကိုရသမြောက်ပါတယ်။
ဘာဘဲပြောပြော အခုခေတ်မှာ အကတော်တဲ့ကလေးတွေကို နေရာလေးတစ်ခုပေးလိုက်တာပါဘဲ။
အဲကလေးတွေ ကတာပြီးလို့ ဒီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ လူရွှင်တော်ရဲ့ စကားတွေကြားရမှစိတ်လေသွားပါတယ်။
အပြင်လောက မှာ သူငယ်ချင်း ချင်းသာပြောလေ့ရှိတယ် ဂီတ တီးမူတ်ပုံနဲ့ပါတ်သက်တာလေးကို ဖိုမကိစ္စ
နဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လို့ ရနိုင်တဲ့စကားလုံးကို ခပ်တည်တည်ပြောသွားလို့ပါဘဲ။
မိန်းကလေးပစ္စည်းနဲ့နိူင်းပြီးေ?ာက် ထဲ့ပြောသွားတော့ ကြားရတာ နားဝင်မချိုပါဘူး။
ဒါပေမယ့် စီစစ်ထည့်မယ်ဆိုရင် အမှားနည်းပါမယ်။
အဲတော့ သီတင်းတပုဒ်ထည့်မယ်ဆိုရင် သူများထက်ဦးဘို့အဓိကလား မှန်တာက အဓိကလားလို့မေးချင်ပါတယ်။
ဖိုမကိစ္စဆိုတာ လူတိုင်း ဆက်စပ်ပါတ်သက်နေတာ အမှန်ပေမယ့် လူဆိုတာ သိသာသိသေမမြင်မကြားစေနဲ့
အဲတော့ အများရှေ့မပြောသင့်တာကို အပြင်ဆင်ဆာမတင်ဘဲထွက်တဲ့ ဗွီဒီယိုကားတွေမှာပါတာကို မပြောလိုပေမယ့် အခုလို ရုပ်မြင်သံကြားကလွှင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ မပြောသင့်ဘူးလိုထင်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ လေးစားရပါသော မီဒီယာသမားများကို တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
မ မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ လို့
ဒီနေ့ည အင်တာနက်ဆိုင်သွားခါနီး တီဗွီကို ဖြတ်ခနဲ့အကြည့်
လူရွှင်တော်ဆီက ထွက်လာတဲ့ေ?ာက် ………..ဆိုတာလေးကြားမိတော့ချက်ခြင်းရေးဖြစ်သွားပါတယ်။
အတွေးပါးပါးလေးသာဆိုတယ်။ Deep thoughts ထည့်ရမဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
သတင်းသမားဆိုတာ ပြည်သူတွေအတွက်အငှားအော်ပေးရတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့
လူရွှင်တော်တွေကိစ္စ… ကျမလည်း အစာမကြေတာကြာပြီ။ အဲဒီလို Taboo words တွေကို
မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ပြောတဲ့ လူရွှင်တော်တွေဆို တကယ်စက်ဆုတ်မိတယ်။ ကိုယ် မကယ်နှိုင်တဲ့
(မ..မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ) ….ထောက်ခံပါတယ်။။
တီချယ်ရေ- အဲဒါကြောင့်လည်း သာမန် သမရိုးကျ လူရွှင်တော်တွေကနေ ကျက်ထားတဲ့ ပျက်လုံးတွေချည်း ကြားနေရရာက၊ ဇာဂနာတို့ထွက်လာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းကြောင်း၊ အဆင့်မြင့်တဲ့ ပျက်လုံးတွေက လူတွေကို ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
မီဒီယာ သတင်းအမှားတွေ ကြောင့် တစ်ကယ် အာရုံနောက်ပါသဗျ…၊
ရေးခွင့်လေးရတယ် ဆိုရင်ပဲ အလုအယက် ဦးအောင်ရေးကြတော့တာ…၊
မှားပြီ ဆိုရင် သတင်းအမှားပြင်ဆင်ချက် လုပ်လိုက်ရုံလေးနဲ့ ပြီးစတမ်းလားဗျာ…။
ဘယ်ရေးသူရေးတဲ့သတင်းကအမြဲတန်းမှန်ကန်တယ် တိကျတယ်ဆိုတာကို သိထား..
လေ့လာထားရှိရမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ရေးသူတိုင်းဟာမဖတ်မိစေဖို့နဲ့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရေးသားနိုင်သူရဲ့ 
သတင်းကိုသာရွေးပြီး ဖတ်ဖို့ အမြဲမှာကြားပါတယ်..ကိုယ်ကသိချင်စပ်စုချင်လို့သတင်းတိုင်းကိုလိုက်ဖတ်
နိုင်ငံရေးနဲ့ သတင်းကင်းလို့ မရဘူးတဲ့ သူတို့ နှစ်ခုကိုမသိရင်အကန်းနဲ့ တူတယ်သိကိုသိရမယ်လို့ ..
ငယ်ငယ်ထဲကနေသတင်းနားထောင်တတ်ဖို့ ဖတ်ဖို့ အလေ့အကျင့်ရအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်..
မိဘရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ငယ်ငယ်ထဲကပင်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်သမျှအလုံးစုံကိုသိခွင့်မြင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်..
သတင်းသမားတွေကတော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဘယ်နားကပေါက်တက်ကရ အတင်းတွေကြားပြီး သတင်းလုပ်နေလည်းမသိ ပါဘူး။ ဂျာနယ်တွေကလည်း သတင်းပေးသူကို သေသေချာချာ စစ်သင့်တယ်။ သတင်းသမားတွေကလည်း ကိုယ့်သတင်း ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်ရမှာပေါ့။ သတင်းကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက် နစ်နာသွားရင် သတင်းပေးသူနဲ့ဂျာနယ်တိုက်ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်တယ်။ ခုဟာက အတင်းတွေကို သတင်းလုပ် .. ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းအောင် လုပ်ပြီး ဖတ်နေတဲ့ ပရိသတ်ကို စော်ကားနေသလိုပဲ။
မ မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ။
က ကိုပေါက် လေးစားလောက်။
အ အေးကေ အမှန်တွေ လေ။
ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်မှာ အရာရာတိုင်းသည် ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ မကင်းနိုင်လို့ သတင်းဆိုတာလည်း ဦးအောင်ရေးနိုင် တင်ပြနိုင်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။ စေတနာအမှားရှိသလို တမင်ဖွတာတွေလည်း အများကြီး။ တချို့ကြတော့လည်း မစောင့်နိုင်လို့ စွန့်တင်လိုက်ရတယ်။ အားလုံး ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် မဖြစ်နိုင်လို့ (ဦးပေါက်လည်း လက်ခံထားတယ်) အမှန်နဲ့ အမှား။ သတင်းဦး၊ သတင်းထူး နဲ့ သတင်းရူး၊ သတင်းနဲ့ အတင်း ရာခိုင်နှုန်းယှဉ်ပြီး အကဲဖြတ်သင့်တယ် ထင်တယ်။ မှားနိုင်ကိန်း သင့်တော်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတခု စံထားပြီး ကြည့်နိုင်တယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ဒါမျိုးရှိတတ်လို့ ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်သ၍ လက်ခံသင့်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ သတင်းစာကြီးတွေတောင်မှ အမှားမကင်း၊ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုများ ရှိပါတယ်။ သိပ်သတိထားလွန်းရင် သတင်းအနှစ်သာရ ပျောက်ဆုံးသွားတတ်လို့ အကျိုးထက် အပြစ်များနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ သတင်းဦးဖြစ်ပေမဲ့ သတင်းသမားတိုင်း လိုက်နာရမဲ့ အချက်အလက်များကိုတော့ အတိအကျ လိုက်နာဖို့ လိုတာပေါ့နော်။ ဥပမာ – အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ခလေး နာမည်၊ လိပ်စာ၊ ဓာတ်ပုံကို မဖော်ပြရမှာ။ ကြော်ငြာဆိုရင် ကြော်ငြာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရမှာ၊ သူများစာ၊ သတင်းကို တိုက်ရိုက်ကူးမချရ။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီဖြစ်မှလည်း စာဖတ်သူ စိတ်ဝင်စားပြီး ရောင်းအားတက်၊ ဒါမှ သတင်းသမားတွေလည်း သတင်းလိုက်ရကျိုးနပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးပေါက်မာစတာ ပြောတာကော..နှစ်ခုလုံး မှန်၏..
ကျွန်မကြားမိလိုက်တဲ့ ကားအိပ်ဇောနဲ့ကပ်ပြီးပါသွားတဲ့ကလေးမလေးကတော့ …သက်သာလာလို့ ဆေးရုံကဆင်းပြီးပြန်လာတာပါ … ။ (ဂျာနယ်တခုထဲမှာလည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်) မတတ်နိုင်တော့လို့ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပေါင်တို့ လက်တို့မှာလည်း အသားတွေပဲ့ထွက်ကုန်တာ သူ့ခမျာ အ၀တ်တောင် အရှက်လုံရုံလောက်ပဲ ၀တ်ရရှာတယ် … ။ ဖတ်မိပြီး စိတ်မကောင်းဘူး ။ ဘယ်လို အကုသိုလ်ဝဋ်တွေပါလာခဲ့သလဲပေ့ါ … ။ တိုက်သွားတာက အငှားကားလေ .. ကားသမားဘက်က လာညှိတယ် ငါးသိန်းပေးမယ် အမှုမဖွင့်ဖို့ပေါ့ …. ။ ကောင်မလေး အမေတောင်းတဲ့ပမာဏကနည်းနည်းများနေတယ် ( များလည်း များသင့်တာပါပဲ …ကလေးက မသေယြုံ့ဖစ်သွားပြီး ကျောင်းပါနားလိုက်ရတာကိုး ) ။ ဒါနဲ့ ကားသမားဘက်က လာမညှိတော့ပဲ …. အမှုဖွင့်ချင်ဖွင့်လို့ ပစ်ထားတယ် ကြားတယ် … ။
ဟိုးတနေ့က အကအဖွဲတွေပြိုင်တာ ကြည့်လိုက်ရပါတယ် … ။ အတော်လေးကောင်းတယ် ကောင်မလေးတွေအဖွဲ့က စန္ဒယားတီးသလို လူငါးယောက်နဲ့ လုပ်ပြသွားတာလေ … ဒါကို ခင်လှိုင်က … သူလည်း စန္ဒယားတီးချင်လိုက်တာ ၀င်လုပ်တယ် … ။ လေးပေါက်ပြောတာ အဲ့ဒါမို့လား … ။
စန္ဒယားတီးတဲ့ အကကွက်ဖြစ်ဖို့ … ဖင်ထိုင်ခုံအနေနဲ့ တစ်ယောက်က ကုန်းကုန်းလေး လုပ်ပေးထားရတယ် ။ ဖင်ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင် တီးမယ့်လူက တစ်ယောက်…. စန္ဒယားလုပ်ဖို့ လူနှစ်ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ကုန်းကုန်းလေးတွေ ငုံနေရတယ် …. စန္ဒယား အဖြစ်ကတော့ …. ခုနက ခေါင်းချင်းဆိုင်နေတဲ့ နှစ်ယောက်အပေါ်ကို ကျန်တယောက်က ပက်လက်လှန်အနေထား အိပ်ချလိုက်ရတယ် .. .. ။ တီးတဲ့တယောက်က စန္ဒယားကို ဟန်ပါပါတီးတာ …ကြည့်ရတဲ့ လူတောင် ကောင်မလေးတော့ အတော် ယားစိစိဖြစ်မှာပဲလို့ မသက်မသာတွေးမိသေးတယ် … ။
လေးပေါက်ရေ ဒီခေတ်မှာ မီဒီယာတွေကလည်းများနေတော့ .. .သူ့ထက်ငါဦးအောင် သတင်းတင်မယ်ဆိုတာချည်းဖြစ်နေတယ် ။ မှန်လား မှားလား စဉ်းစားချိန်တောင် သိပ်မပေးပဲ ထည့်တယ်ထင်ပါရဲ့…. ။ မီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘယ်လို ဥပဒေများရှိမလဲ သိချင်လိုက်တာ … ။
အခု ခေတ် မီဒီယာတွေကြောင့် အကျိုးရှိလာတာတွေ များသလို
ကျင့်ဝတ် မထိန်းတဲ့ မီဒီယာတွေကြောင့်လဲ နာမည်ပျက်တာတွေ ရှိနေတယ်
ဦးပေါက်တို့ လို ထောက်ပြ ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ၊ အသိအမြင်ကြွယ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကြောင့် ရေရှည်မှာတော့ အရည်အချင်း မပြည့်မှီတဲ့ မီဒီယာတွေ ကျန်ခဲ့မှာပါ
မ မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ လို့ ထပ် အော်ပေးလိုက်ပါတယ်
လေးပေါက် ပြောတာ လက်ခံတယ်… မှန်လည်း မှန်ဖို့လိုတယ် မြန်လည်း မြန်ဖို့လိုတယ်…
နောက်ဆိုရင် မီဒီယာများ ဒီထက်ပိုပြီး စနစ်တကျနဲ့ မှန်ကန်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်….
ဟုတ်ပါတယ် ” မ မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ “….
ရှုပ်တယ်ဗျာ ရေးချင်တာ ရေးချင်သလိုသာရေးကြ
မရေးမှာ သတင်းအမှောင်ချမှာ သာ ကြောက်ရတာ …
အရင်လို one way communication မဟုတ်တော့ဘူး
2way ဖြစ်သွားဘီ(ဂီဂီ ၂ဖက်ချွန်သွားဘီလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ
၂ဖက်ချွန်တာ မှော်ချာ ပါ)
ကိုယ်စိုက်တာ ကိုယ် ရိတ်ရမှာပဲ… လူထုက တုန့်ပြန်လိမ့်မယ်
ပေါက်ကရတော့ မလုပ်နဲ့နော် …မီလျံ ၈၀၀သော ယူဇာတွေ
ရှိတဲ့ မဟာဖေ့စ်ဘုတ်တော် ကြီးပေါ် မာလထှီ လန်းကွေ့ဂ်ျ့ နဲ့ ရောက်ပြီး
မဟာ၆ရှက်တော်ဂျီး ..ဗျန်းဗျန်းကွဲသွားမယ်..ဟို ဖွတ်သတင်းဆို
ခုထိ ဆဲလို့ ဆိုလို့ကောင်းဒုန်း …. ပီအိပ်ခ်ျဒီဝယ်တဲ့ ဟိုလူဝကြီး
ဆိုလည်း အတုဖြစ်ကြောင်း ယူနီဗာစတီကြီးကကိုတရားစွဲထားတာလေးဖတ်ဦးမား
သတင်းကြိုက်တဲ့လူတွေ သတင်းကောင်းတဲ့ဟာ ရွေးဝယ်လိမ့်မယ်
ပေါက်ကရရေးတဲ့ စာ ကို ပေါက်ကရ ကြိုက်သူတွေဝယ်လိမ့်မယ်
ဖရုတ်သ၀ါစာ ကို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အဆဲခံချင်တဲ့ လူတွေ ၀ယ်လိမ့်မယ်
အညှီအဟောက် ကို အညှီအဟောက်လိုက်စားသူတွေ (ပေါက်-ပေ-လူး-သော့-တီ-စည်-မှော်)တွေဝယ်လိမ့်မယ်
HOAX တွေလည်း မောရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ် …မရပ်ရင် ယုံမိလို့ ပုံမိတဲ့လူတွေ ၀ိုင်း မီးဒုတ် လိမ့်မယ်
ဆဲတာဆိုတာ တွေပါလို့ မကျေလည်တာလား …ဟဲဟဲ …လက်တွေ့ဘွမှာလည်း
၅နှစ်သားကလေးလေးတောင် ဂလောက်ကတော့ ဆဲကြတာပဲကို ….ဆဲရမယ့်နေရာမှာ ဆဲပါစေဂျာ.. သရုပ်မှန်ပေါ့ …
မဆဲသင့်တဲ့လူ ကို မဆဲရင် ပီးတာပဲ အဲ့ သရုပ်မှန်ကနေ သရုပ်လွန် သရုပ်ပျက်ဖြစ်လာရင်
မ မီဒီယာ မတည်ကြည်ပါဖြစ်ရင် အပုပ်ချတာ သရုတ်ပျက်တာဖြစ်ရင် တိုင်ကြတောကြ တရားစွဲကြ
ဆော်ကြ ခုတ်ကြ သတ်ကြလိမ့်မယ်…. သေ ..အေးတာပဲ …သနားဝူး
အဲ့သည်တော့ တယောက်ယောက် စံပြဖြစ်ဖူးသွားရင် လုပ်ကြပါဦးဟ ဆိုတောင် လုပ်တော့မှာ မဟုတ်လော့ဝူး
မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးလိုက်စမ်းဘာ …ရှေ့နေ ရွှေခေတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်
တားတားကြီးလာရင် ဘာလုပ်မဲ …ချေ့ နေ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ခေတ် ဖြစ်တွားလိမ့်မယ်..
သည်တော့ မပူပါနဲ့ လေးပေါက်ရ သူ့ စရိတ်နဲ့သူ သွားကြပါလိမ့်မယ်..
လုပ်ဟေ့ ဂီဂီရေ … အရှေ့ကျွန်းဝိဇ္ဖာက hight speed internet စီးတော်ယဉ်နဲ့ဆိုတော့
ရွှေပြည်ကြီးက မှော်ဆရာလေးက ထော်လာဂျီ အင်တာနက်နဲ့ လိုက်မမှီတော့ဝုး …
မနက်ကတည်းက ရေးထားတာကို မတွေ့လို့ ညမှ လာမန့်ပြီးတော့များ ..ဟွန်း..
နက်ဖြန် လူစွမ်းကောင်း အပိုင်း ၁၄ တင်မယ်ဗျာ…
မ မီဒီယာ တည်ကြည်ပါ
ပ ပလီပလာ လူ ချဉ် မှာ
ည အတည်အခါ ပူလီ ဆာ ( ပူလီ = ဟိန္ဒူကုလားများ စားသော ဂျုံဖြင့် ပြုထားသည့်မုန့် တစ်မျိုး )
ပြောစရာရှိတာ ပြောပြော….ပြောပြော ….ပြောပြီးတော့ …………ဘြာ?စ်တယ်ဆိုလား..။ အဲဒိသီးချင်းထဲကလိုပဲ..။ ပြောတဲ့သူမောတယ် ကိုပေါက်ရေ….။ အဲဒိလိုသာပြောစရာတွေ့တိုင်းပြောနေရမယ်ဆို………. အိပ်ရမှာမဟုတ်……………..။
ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ကိုနေ
ဒီပိုစ်က ကော်မင်းတော်တော်များများကို အနီတွေပေးသွားတယ်။
အမှန်က အနီပေးတယ်ဆိုတာ သတ္တိမရှိသူတွေရဲ့အလုပ်ဘဲ။
တကယ်ကို သတ္တိရှိရင် ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကော်မင်းပေးပြီး မကြိုက်ကြောင်းပြောရတယ်။